Nginezizathu ezinhle zokubambelela emlandweni okhazimulayo wokhokho bami: Ngu, François Marie Arouet, dit Voltaire Babo, amehlo ayindilinga, ikhala labo elishubile, izindebe zabo njalo ... Funda kabanzi
UThales waseMiletus waba uyise we "Western Philosophy", uSocrates noHomer (umlobi we-1er Greek) bavuma ukuthi baye eKemet ukuba bafunde. UDiodorus waseSicily okwamanje wabhala ukuthi ... Funda kabanzi
Lokhu isikhathi eside ngaphambi kokuba iNorth West-Yurophu ibe ngabasekeli bokuqala bamaGreki. Kwangaphakathi kwekhulu le-18th eNyakatho Yurophu Yurophu (njengenjwayelo) ukuthi i-real im ... Funda kabanzi
Ngaphambi kwe-435 BC waqala ukufundisa emigwaqeni yase-Athene ezama ukukwenza abantu bahlakaniphe ngokuqaphela ukungabizi kwabo. USocrates waba nabafundi abaningi ... Funda kabanzi
- I-Samos iyisiqhingi ogwini lwaseTurkey, hhayi kude neMillet. UPythagoras cishe ungumfundi weThales no-Anaximander. Uhamba waya eGibithe, uthunjwa eBhabhiloni, ubuyela eS ... Funda kabanzi